မောင်လာ အလီ အလိုင်းဟစ်စလာမ် ဆိုတာ …. ? အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန
ဒီဇငျဘာ ၁၀, ၂၀၁၈ - ၉:၁၂ ညနေ News Code : 920117 Source : ABNA Link:
عن ابن یزید قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن قوله تعالی : واعتصموا بحبل الله جمیعا قال : علی بن أبی طالب علیه السلام حبل الله المتین .
تفسیر العیاشی 1/194 البحار 36 / 15 و
تفسیرنورالثقلین 1 /377
အေဗ်နေယဇီးဒ် ပြောကြားတင်ပြပါတယ်။ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် ဟဇရသ် အဗူလ်ဟစန် (အ.စ) ထံ အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် မိန့်ဆိုထားသည့် (( အသင်တို့အားလုံး အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်၏ ကြိုးတော်အား ဆွဲကိုင်ထားကြပါလေ။ )) နှင့်ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်တော်မှ အဖြေပေး မိန့်တော်မူ ၏ ။ အလီ ဗင်အဘီ သွာလစ်ဗ် (အ.စ) သည် အလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ် ၏ မြဲမြံ ခိုင်မာသည့် ကြိုးတော်ဖြစ်ပါတယ်။
قال النبیّ صلی الله علیه وآله : یاعلی ما عرف الله حقّ معرفته غیری وغیرک وماعرفک حقّ معرفتک غیرالله وغیری .
مناقب آل ابیطالب 3/267
မဟာတမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) မိန့်တော်မူသည်။
((အိုအလီ (အ.စ) အသင်နှင့် ကျွန်ုပ်မှ အပ မည်သူမျှအလ္လာဟ် ဟို အရှင်မြတ်၏ နေရာ အဆင့်အတန်း ကို မသိ ကြချေ။ ကျွန်ုပ်နှင့် အလ္လာဟ်မှ အပ မည်သူမျှ အသင်၏တိုက်တန်သည့် အဆင့်အတန်း နေရာကို မသိရှိကြပေ။
قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم : لو اجتمع النّاس علی حبّ علیٌ بن أبی طالبٍ لماخلق الله النّار .
ینابیع المودة / 125 . کشف الغمة 1/ 99
احقاق الحق 7/147 و البحار39 / 305
အေဗ်နေအဘာစ် မှ ဆင့်ပြန်ပါတယ်။ မဟာတမန်တော်မြတ် (ဆွ) မိန့်တော်မူသည် ။
(( အကယ်၍ အသင်တို့ အနေဖြင့် အလီ (အ.စ) အား အချစ်မေတ္တာ ထားရန် အတွက် စုပေါင်းကြမည်ဆိုလျှင် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် သခင်သည် ဂျဟန္နမ် (ငရဲဘုံ) ကို ဖန်းဆင်းမည် မဟုတ်ချေ။ ))
قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم : علیّ بن أبی طالب حلقة معلّقةٌ بباب الجنّة من تعلّق بها دخل الجنّة .
فرائد السمطین 1/ 180 . احقاق الحق7/ 168
ကိုယ်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) မိန့်တော်မူသည်။
(( အလီ အေဗ်နေအဘီ သွာလစ်ဗ် (အ.စ) သည် ဂျန္နသ် (သုခဘုံ) တံခါးဝတွင် ချိတ်ဆွဲထားသည့် လက်ကိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သူမဆို ၎င်းလက်ကိုင်ကို ဆွဲကိုင်မည်ဆိုလျှင် ၎င်းသည် ဂျန္နသ် (သုခဘုံ ) တွင်သို့ ဝင်ရောက်စံမြန်းရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ))